PSY ရဲ့ ဖန်တီးမှု အသစ် HANGOVER ~ Myanmar Forward
Time in Rangoon
အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပျံနှံ့ ခဲ့ကြသည့် GTC အတွဲ မင်္ဂလာဆောင်ကြပြီ
သံလျှင် GTC က စုံတွဲ လည်း သဘောပေါက်သွားကြပြီ ................. လူငယ်ဆိုတာ အမှားနဲ့ မကင်းပါဘူး။ အတင်းအဖျင်း ပြော သူတွေ ရပ်တန်းက ရပ...
အလန်းလွန် အလွန်လန်း မြန်မာမလေးများ
၁၅-နှစ်သမီးလေးကို မွေး-စားသော(အလိုမတူ ကာမဆက်ဆံ) သော ကုလားကို တရားစွဲဖို့ ပြင်ဆင်
(ဖြားယောင်းခြင်း ခံရသော ကလေးမလေး) (တက္ကစီသမား ကိုအောင်အောင်ဦး) ကိုအောင်အောင် ဦးဟာ မျိုးချစ် လူငယ် တစ်ဦးပါ။တက္ကစီ မောင်းသည့် ကား ဆရ...
နိုင်ငံခြားကို သွားချင်နေတဲ့ မမ များ သတိထား (ဖတ်ရန်)
အစ်ကိုမောင်မောင်ရေ အစ်မခင်နှင်းက တွေ့ ချင်လို့ အိမ်ကို လာခဲ့ပါတဲ့ ခင်နှင်းရဲ့ မောင်ဖြစ်သူ ကျော်ကျော်က ကျောင်းသွားရင်း ကျွန်တော့်ကို ၀င်...
ကောင်မလေးက အခု ဆိုရင်တော့ အသက်(၂၀) ပြည့်ပြီး ရောပေါ့။ ဘင်္ဂါလီအမျိုး သားနဲ့ စတင် ချစ်ကြိုက် တယ်လို့ ဆိုရမယ့် အရွယ်ကတော့ မနူးမနပ်(၁၆)နှစ်ေ...
အသစ်တင်တိုင်း Email မှဖတ်ရန်
ဂျာနယ် ဆိုဒ်များ 7daynews weekly eleven internet popular ဈေးကွက် မြန်မာတိုင်းမ် The Voice ရန်ကုန်တိုင်းမ် လျှပ်တစ်ပြက် ရွှေအမြုတေ အလင်းတန်းဂျာနယ်
Internet သတင်းများ Myanmar Daily Mizzima Moemaka BBC irrawaddy VOA barmar Online မွန်သတင်းအေဂျင်စီ ကချင်သတင်း ကုလားတန်သတင်း ကန္တာရ၀တီတိုင်းမ် ရွှေဟင်္သာ ကေအိုင်စီ နိရဉ္စရာ သျှမ်းသံတော်ဆင့်
ဝန်ကြီးဌာန ဆိုဒ်များ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ပြည်သူ့လွှတ်တော် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဗဟိုဘဏ် ပြန်ကြားရေး စက်မှု(၁) နိုင်ငံခြားရေး အလုပ်သမား စွမ်းအင် သစ်တော ပို့ဆောင်ရေး စီင်္းပွားကူးသန်း ဆက်သွယ်ရေး မိုးလေ၀သနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
သတင်းမီဒီယာ ဆိုဒ်များ မြ၀တီ MRTV-4 MRTV-3 ကြေးမုံသတင်းစာ ရတနာပုံ
ဘလော့ ဆိုဒ်များ ကချင်နေ့စဉ်သတင်း Myanmar Express ရွှေမြန်မာမီဒီယာ သစ်ထူးလွင် Today Myanmar Myanmar Daily Star
PSY ရဲ့ ဖန်တီးမှု အသစ် HANGOVER
Posted by drmyochit Monday, June 09, 2014, under နိုင်ငံတကာအနုပညာ | No comments
ယူကျုမှာ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် လူကြည့်များတဲ့ အိုပါဂမ်းနမ်စတိုင်နဲ့ ကမ္ဘာကျော်လာသူ ကိုရီးယား အဆိုတော် PSY ရဲ့ HANGOVER ဆိုတဲ့ ဖန်တီးမှု အသစ်ဟာ ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ကပဲ ယူကျုပေါ် ကို တရားဝင် တက် လာပြီး တရက် အတွင်း ကြည့်ရှုကြိမ်ပေါင်း ၃ သိန်းကျော် ရှိနေပါပြီ။
PSY ရဲ့ ပရိသတ်လည်း အသစ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သူ့ရဲ့ ဖန်တီးမှုကို မြည်းစမ်းလို့ ရပါပြီ။
▼ 2014 (1289)
▼ June (252)
▼ Jun 09 (11)
ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များ ကြည့်ရှုခြင်းက ဦးနှောက်ကို ထိခ...
မြောက်ကိုရီးယားက ထွက်ပြေးလာသူ ၁၃ ဦး ထိုင်း မြောက်...
မွတ်ဆလင်ကိုယုံ၍ သမီးနှင့်ပေးစားပြီးနောက် မုဒိန်းကျ...
မုတ်သုံလေအားကောင်း၍ ဒေသအချို့ မိုးကြီးမည်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လယ်ယာမြေများ အက်စစ်ဓာ...
ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ ကျင်း...
အမြဲတန်း မောပန်းနေရခြင်း အတွက် ဖြေရှင်းနည်းများ
ပါကစ္စတန် ကရာချီလေဆိပ် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွာ...
► 2013 (5974)
► Oct 17 (55)
► Oct 10 (46)
► Sep 09 (37)
► April (446)
► February (571)
► 2012 (4483)
► October (884)
► August (848)
drmyochit72@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်
blog counter widget
1G,2G, 3G, 4G ဆက်သွယ်ရေးနစ် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
ဆောင်းတွင်းမှာ ပြေးကြရအောင် ဘော်ဒါတို့
မြန်မာ IT လူငယ်များ
စွဲလန်းမှု နဲ့ မိုင်တိုင် ၃၀ - ****************** ' သတ္တဝါတိုင်းကို ကယ်တင်လို့မရဘူး။ အားလုံးက ကံစီမံရာအတိုင်းပဲဖြစ်ရတယ်' ပန်းဒေါင်းဝထ္ထုထဲမှာ တစ်ဖက်သားကို ကူညီချင်တဲ့ ခင်နွယ်စိုးကို ဦးေ...
အလုပ်များလွန်းလို့ ရည်းစားထားဖို့ အချိန်မရှိဘူးဆိုတဲ့ လီမင်ဟို - ဆိုးလ်−တောင်ကိုရီးယားနာမည် ကျော် သရုပ်ဆောင်မင်းသား လီ မင်ဟိုက အလုပ်များလွန်းသော ကြောင့် ချစ်သူရည်းစားထားရန် အချိန်မရှိကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့၌ြ...
Facebook မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ရောင်စုံကာတွန်းများ (၁၅ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀၁၉) -
မှော်ဘီမြို့တွင် အပူရှောင်စခန်း ၁၅ ရက်ကြာ ဖွင့်လှစ် - မှော်ဘီမြို့ သုဒ္ဓ၀ိပဿ နာရိပ်သာတွင် မေလ ၂ ရက်မှစ ၍ ၁၆ ရက်အထိ အပူရှောင် စခန်းကို ၁၅ ရက်ကြာ ဖွင့်လှစ် မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။အဆိုပါရိပ်သာသည် မရှိ ဆင်းရ...
ပျက်ကျခဲ့သည့် အင်ဒိုနီးရှား လေယာဉ်ပျက်မှဟု ယူဆရသည့် အပျက်အစီး အစိတ်အပိုင်းများ ရှာတွေ့ - လူ ၅၄ ဦးကို တင်ဆောင်ပျံသန်းရင်း ပျက်ကျသွားသည့် အင်ဒိုနီးရှား ခရီးသည်တင် လေယာဉ်ထံမှဟု ယူဆရသည့် အပျက်အစီး အစိတ်အပိုင်းများကို ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့များက တွေ့ရှိခဲ...
အပြုနှင့် အဖျက် ခွဲခြားရန် မခက်ပါ - ရခိုင်ပြည်နယ်သည် နိုင်ငံတော်၏ အနောက်ဘက် အစွန်းပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး ဧရိယာ စတုရန်း မိုင်ပေါင်း ၁၄၂ဝဝ ကျယ်ဝန်းသည်။ ပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ် ၁၇ မြို့နယ်...
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲ လုံခြုံရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဌ မြိတ်မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ အထူးရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ဆုံ - တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲ လုံခြုံရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ ဥက္ကဌ မြိတ်မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ အထူးရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ဆုံ မြိတ် အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက် ...
Cara Daftar Judi Bola Online - Indonesia adalah sebuah negara dengan penduduk yang sangat besar, dimana bisnis judi bola online sangatlah besar di negara itu. Hal ini dikarenakan banyak ...
ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ အလေးထားပိုမိုဖောက်လုပ်ရန် လွှတ်တော်သို့ အဆိုတင်သွင်း - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါသည့် မြို့နယ်များအပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားများနေထိုင်သည့် ပြည်နယ်များတွင် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများအား အလေးထားပြီး ပိုမိုဖောက်...
လူငယ်များ ချိတ်ဆက်မှုပိုမိုကောင်းမွန်ရန် ဘီးလင်းမြို့နယ် ကရင်လူငယ်များကွန်ယက်ဖွဲ့စည်း - ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။ နန်းဝေဖြိုးဇာ မွန်ပြည်နယ် ဘီးလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကရင်တိုင်းရင်းသားလူငယ်များအနေဖြင့် ကရင်အရေးအရာ လုပ်ဆောင် သည့်နေရာတွင် ချ...
Copyright 2010 Myanmar Forward
Designed by CamelGraph | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Templates